David Luiz oo shaaca ka qaaday sababta dhabta aheyd ee ka dambeysay inuu ka tago Chelsea – Gool FM
David Luiz oo shaaca ka qaaday sababta dhabta aheyd ee ka dambeysay inuu ka tago Chelsea
Dajiye October 21, 2019
(London) 21 Oct 2019. Daafaca reer Brazil iyo kooxda Arsenal ee David Luiz ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sababta dhabta ah uu kaga soo dhaqaaqay Chelsea uu hogaaminayo tababare Frank Lampard.
Wargeyska caalamiga ah “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu David Luiz kaga hadlay sababta dhabta ka dambeysay inuu ka soo dhaqaaqo kooxda Chelsea waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Aniga iyo Frank Lampard waxaan wada yeelannay wadahadal fool ka fool ah, fikradihiisa kubadeed waxay ahaayeen kuwa ka duwan fikradaheyga, ugu dambayntiina wuxuu oggolaaday inaan ku baxo qaab daacad ah”.
“Waan wada ciyaarnay, waana wada guuleysanay, waxaan ku guuleysanay tartamada Champions League iyo Europa League, guulahan oo dhan waxaan ku gaarnay si wada jir ah, ka tagisteyda kooxda Chelsea waxay aheyd mid cajiib ah oo daacadnimo leh”.
Si kasyaba ha noqotee, kaddib dhamaadka xilli ciyaareedkii hore, waxaa si ramsi ah loogu dhawaaqay in daafaca reer Brazil ee David Luiz uu ugu dhaqaaqay kooxa Arsenal heshiis gaaraya ilaa iyo 2021.
32-sano jirkan ayaa go’aansaday inuu badalo jawiga kaddib markii la xaqiijiyay inaan loo aqoonsaneen xiddig muhiim ka ah qorshaha macalinka cusub ee Frank Lampard xilli ciyaareedkan.
“Aaway Van Dijk?” – Rafael van der Vaart oo ku jees jeesay Harry Maguire
Waakee macalinka aan aheyn Mourinho ee uu doonayo Florentino Perez inuu noqdo bedelka Zidane?